यी ४ राशिका महिलामा हुन्छ ‘प्रिय आमा’ बन्ने गुण - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com यी ४ राशिका महिलामा हुन्छ ‘प्रिय आमा’ बन्ने गुण - खबर प्रवाह
यी ४ राशिका महिलामा हुन्छ ‘प्रिय आमा’ बन्ने गुण
हरेक आमाले आफ्नो बच्चालाई धेरै माया गर्छिन् र हरेक कुरा आफ्नो बच्चालाई सिकाउने कोशिश गर्छिन्। बच्चाको लागि पनि उनकी आमा संसारकै सब भन्दा राम्रो आमा हुन्छिन्। हरेक आमाले पनि बच्चाको जन्मदेखि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बच्चाको लागि समर्पण गर्छिन्, तर ज्योतिषको अनुसार केहि राशिका महिलाहरू बच्चा हुर्काउने सम्बन्धमा सबैभन्दा उत्तम आमा हुन्छन्। कुन राशिका महिला ‘सर्वश्रेष्ठ आमा’ हुन्छिन् त ?
कर्कट राशिको स्वामी चन्द्रमा हो। यस राशिका आमा आफ्नो बच्चाको बारेमा धेरै भावुक र कोमल हृदयका हुन्छन्। यो राशिका आमाको लागि उनको बच्चा र उसको खुसी नै जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ। उनी हरेक परिस्थितिमा आफ्नो बच्चाको साथ दिन्छिन्।
बुध ग्रह कन्या राशिको स्वामी हो। बुध ग्रह, व्यक्तिको बौद्धिकता र वाग्लोताका कारक हो, त्यसैले यस राशिका आमालाई धेरै रचनात्मक र स्मार्ट मानिन्छ। उनी आफ्नो बच्चालाई हरेक गतिविधिमा निपूर्ण बनाउँन चाहन्छिन् र आफ्नो बच्चालाई मल्टि-टास्किंग गर्न सक्ने तरीकाले तयार पार्छिन्। यस राशिका आमाले आफ्नो बच्चाको जीवनमा अनुशासन कायम राख्छिन्, किनभने उनी विश्वास गर्छिन् कि जीवनमा कुनै पनि कुरा हासिल गर्न अनुशासित हुनु निकै आवश्यक हुन्छ।
मिथुन राशिका आमा आफ्ना बच्चाहरूलाई साथीको जस्तो व्यवहार गर्छन्। उनी आफ्ना बच्चाहरूको यसरी पालन-पोषण गर्छिन् कि उनीहरू आफ्नो जीवनको निर्णय राम्रो तरीकाले लिन सकुन्। उनी आफ्ना बच्चाहरूलाई यसरी हुर्काउँछिन् कि उनीहरू कसैमाथि निर्भर हुन नपरोस्, त्यसैले उनी आफ्ना बच्चालाई जीवनको अनुभव आफैँ लिन दिन्छिन्। यस मैत्री व्यवहारको कारण बच्चाहरू आमासँग निकै सहजै महशुस गर्छन्।
यस राशिका महिलाहरू सरल र भावनात्मक हुन्छन्। उनी आफैँले सपना देख्छिन् र यसलाई पूरा गर्ने सामर्थ्य राख्छिन्। उनले आफ्ना बच्चाहरूलाई त्यहि नै सिकाउँछिन् कि कुनै पनि सपना पूरा हुन सक्छ। उनीले आफ्ना बच्चाहरूलाई सिकाउँछिन् कि सबैभन्दा पहिले आफू राम्रो मान्छे हुन निकै जरूरी हुन्छ। आमा जस्तै बच्चा पनि प्रकृति प्रेमी, भावनात्मक स्वभावका हुन्छन्। यस राशिको आमाले आफ्नो बच्चालाई संस्कारी र प्रतिभाशाली बनाउँछिन्।
ओलाीको हटले पाटीएकता संकटमा प¥यो : प्रचण्ड
गैँडाले धानबाली सखाप पा¥यो , नियन्त्रणमा निकुञ्ज असफल
बुधबारको दिन यस्तो काम गर्नुहोस्, पुण्य प्राप्ती हुनेछ
कुनै काम गर्दै हुनुन्छ भने वार र राशि अनुसार काम गर्दा तपाईलाई फाइदा मिल्छ । हिन्दुधर्म शास्त्रका विभिन्न धर्म ग्रन्थ र वास्तु शास्त्रले कुनै कामको शुभ फल र लाभका लागि केही प्रावधान गरेको छ । जस अनुसार तपाईको खानपान, हिँडडूल, कामको शुरुवातल लगायतका विषय रहेका छन् । तपाईले बार र समयलाई ख्याल गरेर यी काम […]
घरमा श्रीकृष्णको मूर्ति छ भने अपनाउनुस् यस्ता सावधानि !
भगवान कृष्णले आफ्नो सबै रूपले भक्तहरुको मन मोहित गर्छन्। चाहे त्यो रणछोर हो या माखनचोर, ब्रजको गोपाले हो वा गोपीको वस्त्र हरण वाला बालक, उनको हरेक रूप मोहक छ। भगवान कृष्ण एक उत्कृष्ट नीतिनिर्माता थिए, साथै प्रेमका एक परिभाषा। भगवान श्रीकृष्ण कुनै पनि अन्य देवी-देवता भन्दा फरक र अद्वितीय हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि आफ्नो घरमा उहाँको […]
यी चार राशि भएका मानिस आफ्ना प्रेमी माथि हुन्छन् हावी !
कुनै पनि सम्बन्ध सफल हुनको लागि दुबै जना समझदार हुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि सम्बन्धमा एक अर्को प्रति सम्मान छ भने त्यो सम्बन्ध गाढा हुन्छ। तर केहि मानिस यस्ता पनि हुन्छन् जो आफ्नो जीवनसाथी वा प्रेमी माथि कुनै पनि कुरामा हावी हुन्छन्| यी ४ राशिका मानिस आफ्नो जीवनसाथी वा प्रेमी माथि हावी हुन्छन्। सिंह […]
सूर्य-बुध एक साथ हुँदा बुधादित्य योग बन्दै, यी राशिलाई लाभ !
ज्योतिषशास्त्रमा बुध ग्रहलाई विशेष स्थानमा राखिएको छ | २ अगस्ट बिहान ३ बजेर ५६ मिनेट जाँदा बुध ग्रह गोचर परिवर्तन गरि कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ र १७ अगस्ट ८ बजेर ४४ मिनेटसम्म यहि राशिमा हुनेछ| कर्कट राशिमा सूर्यको उपस्थिति रहेको अवस्थामा बुधको गोचर पश्चात एक अत्याधिक शुभ बुधादित्य योग बन्नेछ। बुध राशि बुद्धि र व्यवसायसँग […]
शनिबार नगर्नुस् यी ५ काम
एजेन्सी – शनि देव कर्मको हिसाबले फल प्रदान गर्ने गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । नराम्रो काम गर्नेहरुसँग शनि देव रिसाउने र सजाय दिन्छन् भन्ने पनि विश्वास गरिन्छ । ज्योतिषका अनुसार शनिवार केही यस्ता कामहरु गर्न हुँदैन । ती कामहरु गर्दा शनि ग्रह कमजोर हुन्छ । १. फलामलाई शनिको धातु मानिन्छ । शनिबार फलाम घरमा ल्याउँनुहुँदैन […]
बुधबार यी काम गर्नुहोस्, आर्थिक संकट हटेर जानेछ
बुधबार बुध ग्रहको दिन । यसदिन भगवान गणेशको पनि पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। धर्मशास्त्रका अनुसार बुधबार बुध ग्रहलाई पुज्दा विभिन्न समस्याबाट समाधान तथा राहत मिल्ने गर्छ । बुध ग्रहको प्रसन्नताका लागि भगवती दुर्गाको पनि यसदिन पूजा अर्चना गर्दा फाइदा पुग्छ । बुध ग्रहलाई भगवान विष्णुको प्रतिनिति मानिन्छ, त्यसैले धन, वैभवआदिका सम्बन्ध बुधसँग छ। विज्ञापन बुधको […]
५० अर्ब ऋण कृषिमा बाँडियो, तर सबै गाडी र साडीमा गएछ : मन्त्री भुसाल
कोरोनाका कारण ३० हजार चलचित्रकर्मी बेरोजगार